Madaxweynaha Tunisiya - Kaïs Saïed: "Waa inaan aqbalnaa sharciyada ciyaarta, laakiin ma ahan nidaamka" - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Doorashada madaxweynaha Tunisiya - Kaïs Saïed: "Waa inaan aqbalnaa sharciyada ciyaarta, laakiin ma ahan nidaamka" - JeuneAfrique.com
Doorashada madaxweynaha Tunisiya - Kaïs Saïed: "Waa inaan aqbalnaa sharciyada ciyaarta, laakiin ma ahan nidaamka" - JeuneAfrique.com
Dastuuriga ah, bare ka dhiga jaamacadda howlgabnimada, ayaa ah musharrax doorashada 15 September. Dhowr bilood gudahood, madax-bannaanidan ayaa gaadhay meeshii ugu sarreysay ee codbixinta, iyada oo aan xitaa la helin xisbi ama koox olole dhab ah. Waxay faahfaahin ka siisaa Jeune Afrique ujeeddooyinkeeda iyo mudnaanteeda.
Murashax madaxweynenimo Kaïs Saïed sii joogi kara cid ka baxsan. Hadeysan dhisneyn siyaasad dhismeed, qasab ma ahan inuu sifiican u yaqaana dadka reer Tunisiya, marka laga reebo labadiisa dharka ee dastuurka. Meel hoose looguma meeleeyo codbixinta wareegii koowaad ee codaynta, oo loo qorsheeyay Axadda Sibtember 15.
Qareenkan toosan, oo leh qiimeyn muxaafid ah, had iyo jeer waa xaqnimadiisa iyo muujinta ciqaabta laakiin muujinta hal-abuurka ah ee Carabiga qadiimiga ah, wuxuu isku sifeeyaa inuu yahay "mid caadi ah". Waxaa lagu kala soocayaa nidaamka nabaad-guurka, waxay sheegaysaa warbixin cusub siyaasadaha waxayna damacsan tahay ujeedokan in dib loogu noqdo Dastuurka. Waqtiga niyad jabka siyaasiyiinta vis-à-vis ay si weyn u wadaagaan muwaadiniinta reer Tuniisiya, Cuntadani waxay umuuqataa inay shaqeyso.
Dhallinyarda Afrika: Maxay yihiin tillaabooyinka ugu muhiimsan ee barnaamijkaaga?
Kaïs Saïed: Ma lihi barnaamij dhaqameed maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in dadka reer Tunusiya, sida kuwa kale, ay galeen waji cusub oo taariikhi ah. Muwaadiniintu ma sugaan barnaamijyada lagu bixiyo doorashooyinka, laakiin waxay rabaan inay kaalin ka qaataan siyaasada maalin walba.
Waxaan u baahan nahay urur siyaasadeed oo maamul-cusub, xiriir cusub oo aamin ah oo dhexmara dadka iyo taliyayaasha. Jilaaga ugu weyn waa inuu noqdaa dadka, waa sababtaas awgeed waxaan isku dayayaa inaan isaga siiyo qaab sharci ah oo uu ku doorto barnaamijkiisa horumarinta.
Kaïs Saïed wuxuu ka mid ahaa musharixiintii ugu horreeyay ee looga dhawaaqay doorashadii madaxtinimo ee Tuniisiya. Youtube / Abdelmagid ZARROUKI
Golaha cusub wuxuu ka koobnaan doonaa ku xigeennada 276, oo ay ku jiraan wakiillada 11 ee Tunisiyiinta ka yimid dibedda
Maxay noqon doonaan talaabooyinka calankaagu?
Mid ka mid ah ujeeddooyinkeyga ugu weyn waa mashruuc madaxweynaha oo ah dib-u-habeeyn dastuurka, oo ah eraygii ugu dambeeyay ee dib ugu soo noqon doona Golaha. Waxaan jecelahay inaan dhiso awood ka tegi doonta deegaanka, abuuritaanka goleyaasha maxalliga ah ee ergo kasta [waax]. Xubnahooda waxaa lagu dooranayaa warqadda cod-bixinta aan rasmiga ahayn iyo waajibaadkoodana lagala noqon karaa. Mid ka mid ah xubnahooda, oo lagu xushay wax badan, wuxuu matalaayaa heer gobol.
[Tribune] Doorashadii madaxweynenimada ee Tuniisiya: markii dooddu dhammaato - JeuneAfrique.com
Doorashadii madaxweynenimada ee Cote d'Ivoire: dhanka dib ugu noqoshada da'da xadidan? - YoungAfrica.com
Tilmaamaha: CILMI-BAARISTA GUURADA || 41 HACKS OO DHAQAN KARI KARO MAALINTAADA